China Earth auger vagadziri uye vanotengesa | Dongheng Machinery
Icho chinhu chedu KINGER pasi pasi auger
KINGER pasi auger ine makumi maviri neshanu mamodheru kubva kuYDH mini kusvika kuYDH150000, inoenderana ne 0.8-50ton excavator, skid steer uye backhoe loader nezvimwe.
Garandi-Yegore garandi yemota uye 18-mwedzi waranti yegearbox.
YEMAHARA UNHU HYDRAULIC MOTOR
KINGER mushe-mashandiro zvinoreva kuti tinoteerera zvakanyanya kukudziridza zvinonyanya kuvimbika kune vatengi.
Kugadziriswa kweGear kunotora yakakosha kupisa kurapwa kwekugadzirisa tekinoroji, iyo inogadzirwa naDhokotera weTsinghua University.
Yakasarudzika kuna KINGER yepasi auger, iyo Isiri-Dislodgement Shaft idiki-chidimbu dhiraivha shaft yakaunganidzwa kubva kumusoro kumusoro uye yakavharirwa muvhu drill rukoko.
Iyi dhizaini inovimbisa kuti shaft haizombodonha Inogona kugadzira yakachengeteka nzvimbo yekushanda kune vese opareta uyezve chero vakapoterera vashandi, chinova chinhu chinodiwa.
Iyo seti yese inosanganisira zvikamu zvitanhatu sezviri pazasi zvinoratidza:
Tine imwechete pini sunga, yakapetwa pini sunga uye mbereko sunga yekubatanidza KINGER auger dhiraivhi neye excavator / backhoe loader / skid steer nezvimwe.
Isu zvakare tinogadzira auger chibooreso uye yekuwedzera bha isu pachedu. Pane 8mm, 10mm, 12mm uye 16mm dzakasiyana ukobvu hweager ndege kusangana nevatengi akasiyana anoshanda anoshanda.Yakareba kureba iri 1.5m.But isu zvakare tine 1m, 2m uye 2.5m kureba. Izvo huwandu hwehupamhi hunobva 100mmto 2000mm.Tinogona kugadzirwa sekuda kwako.
Nezve yekuwedzera bhawa, pane 1n, 1.5m, 2.5m, 3m dzakasiyana urefu hwakagadzirwa huripo
Iyo dhayamita yekuwedzera bhaa ndeye 89mm, 108mm, 127mm uye 146mm.
Kana zvasvika pamazino sarudzo, isu tinemazino ekucheka, mazino akakomberedza uye akapamhama mazino eakasiyana mamiriro evhu.Cutting meno anoshandiswa kuzunza, kukanda kana yakawanda yevhu ivhu. Mazino akapoterera anoshandiswa kuvhu, ivhu rine jecha, ivhu rakagwamba nechando kana hurungudo hushoma. Meno akazara anoshandiswa kuivhu rakajairika.
KINGERer pasi auger zvinoshanda zvakanyanya kumagetsi emagetsi, masango, telecommunication matunhu eruzivha, njanji-inomhanya njanji, Landscaping, Kudyara Miti, Zvakanaka zvinofinha, Foundation mirwi, Screw murwi kuiswa, Ground sosi kupisa pombi, Pole uye Mast Kuisirwa, Solar simba kuunganidza, Bridge pier kuchera etc.
KINGERer pasi auger ndeye A \_ inoshanda kune dzakasiyana ivhu, senge ivhu rakagwamba, ivhu rakachena, ivhu nyoro, ivhu, jecha, mafossil emhepo, pamwe nejecha, hurungudo zvichingodaro.
Pamusoro pekutsanangurwa ingori yeyako mareferensi Tinogona kuenzanisa yakakodzera modhi zvinoenderana neyako yekuremera uremu.
Pashure: Chisanganiso bhakiti
Zvadaro: MINI yekuchera